Al Bashiir oo markii ugu horraysay Maxkamad kasoo muuqday.
Monday June 17, 2019 - 07:08:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Suudaan ayaa sheegaya in markii ugu horraysay maxkamad uu kasoo muuqday Cumar Xasan Al Bashiir oo talada inqilaab melleteri looga tuuray bishii April ee lasoo dhaafay.
Albashiir oo ammaankiisa ay si aad ah loo ilaalinayay ayaa lageeyay xarunta xeer ilaalinta magaalada Al Kharduum halkaas oo ah halka loogasoo oogay dacwada laxiriira in uu geystay musuq maasuq maaliyadeed oo aad uballaaran.
Goob joogayaal ku sugnaa xarunta xeer ilaalinta ee lageeyay Albashiir ayaa sheegay in markii lagelinayay dhismaha uu dhoolla caddeynayay uuna gacan qaadayay ciidamadii ilaalinayay balse markii dib looga celinayay xarunta uu ahaa mid murugeysan oo wajigiisa laga dheehan karay xanaaq.
Nin lagu magacaabo Calaa'udiin Cabdalla oo ah madaxa ka hortagga musuq maasuqa xukuumadda dabadhilifka Suudaan ayaa sheegay in Albashiir loo heysto dambiyo ay kamid yihiin in uu ku takri falay hantida dowladda isagoo ka faa'iideysanayay xilkii madaxtinimo ee uu hayay muddo dhan 30 sanadood xiriir ah.
Jeneraal Cabdi Fataax alburhaan oo ah madaxa golaha Melleteriga KMG ah ee wadanka Suudaan ayaa horay u sheegay in guriga Al Bashiir lagasoo helay lacago Boqolaal milyan oo dollar ah iyo Keydad dahab ah.
Tan iyo markii jagada laga tuuray Cumar Xasan Albashiir waxaa cirka iskusii shareerayay kacdoonnadii ay shacabku dhigayeen iyo gummaadkii ay dadweynaha ugeysanayeen ciidamada melleteriga iyo kuwa sirdoonka ee Albashiir uu dhisay waxaana muuqata in isla kuwa inqilaabka sameeyay ay ku taaganyihiin dhabbihii uu albashiir ujeexay